सांसद महेश बस्नेतसँग एक दिन | My News Nepal
कुमार भण्डारी २०७५ चैत्र ७ गते
झण्डै दुई दशकपछि भएको निर्वाचनपछि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू विकासको कार्यमा कसरी खटिएका छन् । बोलेअनुसारको काम भएको छ कि छैन ? दैनिक कार्यतालिका कसरी बनाउँदा रहेछन् ? एक जनप्रतिनिधिले कतिसम्म काम हुन्छ र गर्छन् ।
यावत जिज्ञासा बोकेर २७ फागुन सोमबार हामीले तत्कालिन नेकपा एमालेको तर्फबाट भक्तपुर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्व उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतको क्षेत्रमा पुग्ने योजना बनायौं ।
बस्नेत नउठ्दै उनको घरमा पुग्ने लक्ष्य बोकेर हाम्रो टिम बिहान ६ः३० बजेनै काठमाडौंबाट हिड्छ । सात बज्न केही मिनेट बाँकी रहँदा हामी उनको घर पुग्न थालेका थियौं । तर, उनलाई ५०० मिटर यता नै भेट्यौं ।
उनी दैनिक कार्यतालिका अन्तर्गत काममा लागि सकेका रहेछन् । अन्य विषयमा केही जानकारी लिन नलागी उनको दैनिक कार्यतालिका अन्तर्गतका कार्य कैद गर्न हामी केन्द्रित भयांै । अनि सुरू भयो हाम्रो क्यामेरामा समयको काउन्टडाउन ।
७ः०० बजे सामुदायिक भवनको कार्यप्रगतिको विषयमा जानकारी
सांसद बस्नेत भएको स्थान अर्थात घरभन्दा ५०० मिटर अगाडी सामुदायिक भवन बन्दै रहेछ । उनले त्यस विषयमा सामान्य जानकारी लिए र त्यहाँबाट अर्को निर्धारित कार्यक्रममा लागे । हामीलाई सामुदायिक भवनको विषयमा केही बुझ्नु थियो । केही समय स्थानीयसँग भलाकुसारी ग¥यौं । सामुदिक भवन कस्तो रहने र त्यहाँ को बस्ने भन्ने विषयमा स्थानीय जिल्ला खानेपानी उपभोक्ता संघका कार्यवाहक अध्यक्ष मणिराम थापाले हामीलाई त्यसबारेमा जानकारी गराए ।
७ः३० बजे फुटसल मैदान निर्माणको काम
निर्धारित कार्यक्रम अन्तर्गत सूर्यविनायक नगरपालिकामा सांसद विकास कोषको रकमबाट भक्तपुरका युवाहरूको खेलप्रतिको मोह बढाउनको लागि निर्माण गर्न लागिएको फुटसल मैदान शिलन्यास गर्ने ठाउमा पुग्यौ । उनले फटसल मैदान शिलन्यास गरे ।
मैदानको विषयमा केही जानकारी लिए र हामीलाई दिए पनि । स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५ को धारा १० को उपधारा १ बमोजिम पूर्वधार विकास कार्यक्रम र त्यस नगरपालिकाको ६०–४० साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आठ वटा कार्यक्रम सञ्चालन भएका रहेछन् ।
तिमध्ये सूर्यविनायक–२ रेडक्रसबाट चार दोबाटो जाने सडक, सूर्यविनायक–७ मा फुटसल र सामुदायिक भवन निर्माण, सूर्यविनायक–४ तर्खाल कृष्ण मन्दिरदेखि सेतोपाटी कार्की गाँउ जाने सडक तथा कुलो निर्माण, सूर्यविनायक–३ मा चमुटोल उकालो बाटो स्तरोन्नती, सूर्यविनायक नगरपालिका ५ को सुर्यनगर सडक कालोपत्रे तथ वडा तहमा पनि समानुपातिक काम भएको रहेछ ।
८ः३० बजे सडक स्तोर उन्नतिको कामका विषयमा अनुगमन
फुटसल शिलन्यासपछि बस्नेतसँगै हामी फर्कियौ । फर्कने क्रममा कटुञ्जे र सूर्यविनायक नगरपालिका अन्तर्गत कटुञ्जेग हुँदै गुन्डु जाने बटोको स्तरउन्नतीको काम भइरहेको रहेछ । बस्नेतले त्यहाँ बसेर काम गर्ने शैली हेरे ।
उनको आँखा गिटी बालुबामा पुगेछ । सहयोगीहरुलाई तयार पारिएको थुप्रो खोस्रीन लगाए । गिटी बालुवा र सिमेन्ट भनिएकोमा तयार थियो गिटी बालुवा र माटो । उनले त्यहिंबाट काम रोक्न र सबै समान जुटाएर गुस्तरीय काम गर्न नर्देशन दिए ।
९ः०० बजे सामुदायिक भवन व्यवस्थित बनाउने विषयमा छलफल
करिव नौ बजे हामी सामुदायिक भवनलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा सरोकारवाला सहितको छलफलमा बस्यौं । सामुदायिक भवनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र प्रयोगमुखी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल थियो ।
सांसद बस्नेतले त्यहाँ यसलाई कसरी काम गर्ने र यो क्षेत्रको सदुपयोग कसरि गर्ने भन्ने सवालमा आफ्ना योजना सुनाए । निर्माण कार्यका विषयमा परामर्श पनि दिए । जहाँ सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना बस्नेतसँगको टिम पनि थियो ।
१०ः०० बजे बेलिब्रिज, पुरातात्विक क्षेत्रका पुनर्निर्माण लगायतका कामको अवलोकन
करिब १० बजेतिर भक्तपुरमा खासगरी मध्यपुरठिमी र सूर्यविनायक नगरपालिकामा भएका र हुँदै गरेका अन्य विकासका कार्य पनि हे¥यौं । साना ठूला विकासका काम एक साथ अघि बढेका रहेछन् । सूर्यविनायक नगरपालिका वडा ७ सडक विस्तारसँगै एक छेउबाट पर्खाल बनाउने कार्य भइरहेको रहेछ । त्यो कार्यको विषयमा हामीले वडाअध्यक्ष उत्तम थापाबाट केही जानकारि लियौँ ।
सूर्यविनायक नगरपालिकामा रहेको धार्मिकस्थल अनन्तलिङ्गेश्वर महादेवको मन्दिरमा पनि हामी पुग्यौ । अनन्तलिङ्गेश्वरमा २०७२ सालको भूकम्पले ठूलो क्षति पु¥याएको रहेछ । धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने भक्तपुरको यो धार्मिक स्थलको पुनःनिर्माणको काम रफ्तारका साथ भएको हामीले देख्यौ । सांसद महेश बस्नेतकै पहल र पूरातत्व विभागसँगको सहकार्यमा पुनःनिर्माणको काम भएको रहेछ । त्यस विषयमा पनि हामीले रिपोर्टिङ ग¥यौं ।
१२ः०० बजे सहयोग हस्तान्तरण तथा सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका विषयमा जानकारी
करिब १२ बजेको थियो कटुञ्जेमा रहेको एक सामुदायिक विद्यालय कटुञ्जे आधारभुत स्कुलमा आत्मानिर्भर युवा समाजलगायतको सहयोमा पोशाक वितरण कार्यक्रम राखिएको रहेछ । जहाँ सांसद बस्नेत पनि थिए । उनले विद्यार्थीहरुलाई पोशाक वितरण गरे ।
सामुदायिक र सरकारी क्षेत्रमा पढेका प्रतिनिधिले अहिले देशको सबै सिस्टम सञ्चालन गरिहरेको अवस्थामा पढाइ खस्कनु राम्रो नहुने उनको भनाई थियो । शिक्षाको क्षेत्रमा विगत, अहिले र भविष्यको विषयमा आफ्नो धारणा राखे ।
निजीमा बढ्दो आकर्षण र सरकारी विद्यालयप्रति विकर्षण देखिएको अवस्था घटाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो । उनले शिक्षाको सुधारमा आफू प्रतिवद्ध रहेको र सहयोगको विश्वास पनि दिलाए ।
सांसद बस्नेतले साना विद्यार्थीको कक्षामा गएर समेत अन्तक्र्रिया गरे । के भए हुन्थ्यो ? विद्यार्थीसँग बस्नेतको प्रश्न थियो ।
१ः०० बजे शिक्षा सम्वन्धि कामको निरन्तरता
एक बजे उनले शिक्षासँग सम्वन्धित अर्को कार्यक्रममा भाग लिए । जहाँ सूर्यविनायक नगरपालिकाले मानवीय आस्था नामक एउटा गैर सरकारी संस्था (ग्लोवल भोलेन्टिएर) बाट सूर्यविनायक नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायीक र सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई अंग्रेजी माध्यमबाट सरल हिसावले कसरी पढाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा तालिम थियो ।
आस्था नेपालसँग भक्तपुरको अलि पूरानो नै सम्बन्ध रहेछ । भूकम्पको बेला मानवीय आस्था नेपालले गरेको सहयोगको कारण पनि आस्थाप्रतिको आस्था बढी देखियो । जुन विषय सांसद बस्नेतले उजागर गरे ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाको नगर सभाकक्षमा भएको तालिममा विदेशी स्वयेमसेवक पनि उपस्थित भएका रहेछन् । उनीहरुले अंग्रेजीमा कसरी राम्रो गराउने भन्ने विषयमा तालिम दिइरहेका थिए ।
१ः३० बजे सुरक्षा सामाग्री र सतर्कताको विषयको कार्यक्रम
बिहान सातबजेदेखि बस्नेतलाई पच्छाउँदा हामीले विकास निर्माणको काममा देखाएको संवेदनशिलत, गुणस्तरहिन काममा निरुत्साहित गर्न गरिएको प्रयास, खेलप्रतिको चासो, शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा गरेको प्रतिवद्धतालगायतका काम हे¥यौ ।
दिउसोको साढे १ बजेको थियो सासंद बस्नतको अर्को कार्यक्रम रहेछ सुरक्षा सतर्कता र विपद् व्ययवस्थापन सम्वन्धि । जिल्लाभित्र विपद् व्यवस्थापनको सम्वेदनशिलतालाई ख्याल गरेर सांसद बस्नेतको सक्रियतामा सूर्यविनायकस्थित
गणका प्रमुख कर्णेल शिवप्रसाद पौडेलको अग्रसरतामा भक्तपुरमा आउने विपद् व्यवस्थापनमा चाहिने सामाग्रीहरू संकलन गरिएको रहेछ ।
बस्नेतको संयोजनमा स्थानीय व्यवसायीको सहयोगले विपद व्यवस्थापनको लागि आबश्यनक २० लाख रुपैयाँको सामान संकलन गरिएको रहेछ । नेपाली सेनाको संरक्षण, जिल्लाको सम्पत्ती र प्रयोग देशभर गर्न सकिने गरी मेकानिज्म बनाइएको रहेछ । यी सामाग्री संकलनको लागि सांसद बस्नेतको सक्रियता र स्थानीय व्यवसायिको सहयोग ठूलो देखियो ।
२०७२ सालको भूकम्प, २०७४ सालमा यति कार्पेटमा भएको आगलागि, २०७५ सालमा भएको बाढीले भक्तपुरबासीलाई तर्साएको रहेछ । यसरी उद्धारका सामाग्री बटुल्न व्यवसायी तथा समाजसेवी जुटेका रहेछन् । २० लाख रुपैयाँको सामान संकलन गर्ने क्रममा सहयोगी हातहरूको सूची पनि हामीले हे¥यौं ।
व्यवसायी रोमन सिलाकार, विज्ञान राई, श्रीभक्ता कासिछवा, नुनम सुब्बा, लक्ष्मण अवाल, कृष्णप्रसाद ताम्राकार, निरभय बाबु प्रसाई, डिल्ली बराइली, पूर्णप्रसाद लिम्बु, यादव राई, अच्युत खरेल, भिम श्रेष्ठ, किरण थापा, भक्तपुर इटा टायल कारखाना, सुनपा इट्टा व्यावसायी संघ, अरुण सुजु, प्रविण कुश्माको आर्थिक सहयोग नै रहेको हामीले पायौं । त्यसमा अन्य सहयोगी हातहरु पनि धेरै रहेछन् ।
विपद् ढोल बजाएर आउने त होइन, विपद्पछि क्षति कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा गरिएको काम सह्रानीय देखियो । वीरदल गणले सामान मात्रै थुपारेको छैन । यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने तयारीको विषयमा तालिम पनि राखेको रहेछ । सोमबार नै आगलागीबाट हुने भौतिक एवम् मानवीय क्षति न्यूनिकरणका लागि भएको डेमो प्रस्तुत देखाइयो ।
सांसद बस्नेतले डेमोमा सहभागीहरुलाई सम्मान पत्रसमेत उपलब्ध गराए । दिउसोको साढे बजिसकेको थियो । खाना खाने फुर्सदसमेत मिलेको थिएन । सेनाले तयार पारेको खाना टपक टुपुक्क खाएर हामी हिड्यौ ।
३ः०० बजे जाम नियन्त्रणको लागि पहलकदमी
अहिले भक्तपुरबासीको दैनिक समस्या र चासोको विषय कोटेश्वरको जाम रहेछ । धेरै भक्तपुरबासीलाई दैनिक काठमाडौं आउनु पर्ने । आयो की औषत दुई घण्टा जाममा फसिने ।
यही समस्या न्युनिकरणमा लामो समयदेखि सांसद बस्नेतको सक्रियता रहेको स्थानीयले बताए । सोमबार सडक विभागका महानिर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठसहित कोटेश्वर र जडिबुटी खण्डमा हुने जामले गर्दा दैनिकीमा भएको असहजतालाई समधानको बाटोमा केन्द्रित भएको हामीले देख्यौं ।
जाम नियन्त्रणका विषयमा बैकल्पिक उपाय अन्तर्गत मध्यपुरठिमीको विपिआई फाउण्डेसनको आँखा अस्पतालको पारीपट्टिदेखि बालकुमारी निस्कने करिडोरको निरीक्षण गरियो । जडिबुटीबाट बालकुमारीसम्म पैदल निरीक्षण गरेर काम छिटो टुङग्याउनको लागि सांसद बस्नेतले आग्रह गरे भने करिडोरबाट केही दिनमै कम्तिमा साना गाडी चल्ने व्यवस्था मिलाउन सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिए ।
४ः०० बजे टेलिभिजन अन्तर्वाता
चार बजे सांसद बस्नेत एक निजी टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिन गएपछि हामीले आरम गर्ने समय पायौं
५ः०० बजे करिडोर निर्माण र सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापन
पाँच बजे सांसद बस्नेतसँग मनोहरा करिडोरमा हाम्रो पुनः भेट भयो । बस्नेतसँग सुकुम्वासीहरू समेत भेट्न आतुर थिए । करिडोर बन्दा सुकुम्वासहरुलाई आफूहरु कहाँ बस्ने भन्ने जिज्ञासा थियो । उनीहरूलाई उत्साहित बनाउँदै सांसद बस्नेतले उचित व्यवस्थापनको विषयमा जानकारी गराए ।
बस्नेतको साथमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह, शहरी तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल, उपमहानिर्देशक पदम मैनालीसहितको टिम सहभागी थियो । शहरी सचिवले सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा राखेपछि स्थानीय थप आश्वस्त भए । त्यहाँ उनले बैज्ञानिक तरिकाबाट बस्ती व्यवस्थापन गरिने जानकारी गराए ।
सांसदले बस्नेत यस सवालमा पनि खुसी छन् १३ वर्षदेखि बल्झिएको सुकुम्वासी समस्या अहिले उनको रातदिनको प्रयासबाट समधान हुँदै छ । र, करिडोर निर्माणको काम समापन ।
६ः०० बजे मनोहरा–पेप्सीकोला करिडोर अवलोकन
साँझ छ बज्यो । सांसद बस्नेतका त्यस दिनका कार्यहरू सकिएका रहेनछन् । हामीपनि सांसद बस्नेतसँगै मनोहरा पेप्सीकोला करिडोर निर्माणको काम हेर्नतर्फ लाग्यौं । कसरी काम तोकिएकै समयमा सकिदै छ सोधिखोजी पनि भयो ।
७ः०० बजे सडक निर्माणमा भएको प्रगतिको जानकारी लिदै
झमक्क साँझ परेको थियो । सांसदको जाँगर भने १२ घण्टा अघिकै जस्तो देखिन्थ्यो । सात बजे मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको वडा छ अन्तर्गतको सडकखण्डको प्रगति विवरण बुझ्न सांसद सहित पुग्यौ । साथमा स्थानीय जनप्रतिनिधी पनि थिए । कार्य प्रगति ठिकै भएको महसुस बस्नेतले गरे ।
८ः०० बजे पुलको निरीक्षण
आठ बजेपनि सकिएन उनको निरीक्षण, न कम भएको थियो जागर । आफू थकानमा त थिएनन् । अझै केही काम रहेको बताउँदै असहज भए फर्कन हामीलाई आग्रह गरे । केही समय थप विताउने प्रतिक्रिया दियौं, र सँगै हिड्यौं । उनको काम गर्ने शैलीले हामीलाई ऊर्जा मिलीरहेको थियो ।
आठ बजे मध्यपुरथिमी र सूर्यविनायक नगरपालिका जोड्ने ठिमीमा निर्माणाधिन पुलको काम कसरी भएको छ भनेर हेर्यौं । स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि सँगै थिए । अपेक्षा अनुसार नै निर्माण कार्यले रफ्तार लिएको त्यो पुल र विशेषताको विषयमा सांसदका राजनीतिक सल्लाहकार तथा चाणक्य कलेजका अध्यक्ष चन्दनकृष्ण श्रेष्ठले हामीलाई जानकारी गराए ।
९ः०० बजे काम बाँकी हुँदाहुँदै छुट्टिने निर्णय
नौ बज्यो सांसद बस्नेतको कार्यतालिका सकिएन । उनको भनाई अनुसार अझै दुईवटा कार्यक्रम बाँकी थिए । तर, हामीले छुट्टिने निर्णय गर्यौं ।
हामीले बिहान सात बजेदेखि नौ बजेसम्म समय व्यस्त बनाएर गरिएको सुटिङ थिएन यो, नत पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नै । सामान्य छलफलको लागि मात्रै बस्नेतको समय हामीले माग गरेका थियौ । तर, हाम्रो लक्ष्य उनको दैनिकी निकाल्ने थियो ।
हामीले उल्लेख गरेको कार्यतालिकाले बस्नेतको व्यस्तता देखाउँछ । जुन कार्यले बस्नेतले नै अवलम्बन गरेको ‘विकासमा ऐक्यवद्धता राजनीतिमा प्रतिष्पर्धा’ को नाराको सार्थकता पाएको पुष्टि हुन्छ अनि जननिर्वाचित सांसदको दायित्व उजागर पनि ।
कम्तिमा ६० महिनाको लागि भक्तपुरबाट निर्वाचित सांसद बस्नेतको कार्यकाल हामिले अवलोकन गर्ने दिनसम्म १५ महिना मात्रै पुगेको थियो । १५ महिनामा उनले गरेको कामबाट स्थानीय दंग परेको हामीले देख्यौं । आगामी ४५ महिनाको ग्राफ पनि सांसद बस्नेतले कोरेका रहेछन् ।
पाँच वर्षको लागि भक्तपुरमा आफ्नो दायित्वको पूर्ण पालना र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सक्रिय सांसद तथा युवा नेता बस्नेतले बनाएको ४५ महिनाको ग्राफले सफलता पाओस् । हाम्रो पनि शुभकामना ।
कुमार भण्डारी २०७७ जेष्ठ १९ गते
कुमार भण्डारी २०७७ जेष्ठ १८ गते